क्रिकेटका भगवान सचिन तेन्डुलकरको नाम सचिन कसरी रहन गयो ? यस्तो छ रहस्य ! | KTM Khabar
क्रिकेटका भगवान सचिन तेन्डुलकरको नाम सचिन कसरी रहन गयो ? यस्तो छ रहस्य !
२०७४ बैशाख २७ गते १८:०९ मा प्रकाशित
बैशाख २७ । भारतीय क्रिकेटमा पूर्व स्टार ब्याट्सम्यान जतिबेला ब्याटिङ गर्न मैदानमा उत्रिन्थे, त्यतिबेला दर्शकदीर्घाबाट एउटै आवाज आउने गर्दथ्यो, ‘सचिन...सचिन।’ के तपाईंहरुलाई थाहा छ, यो लयलाई पहिलो पल्ट उच्चारण गर्ने व्यक्ति को हुन् ?
सचिनले उनका समर्थकमाझ कौतुहल बनेको यो लयको उद्घोष कसरी भयो ? यसको गोप्यता पहिलो पल्ट सार्वजनिक गरेका छन्। आफ्नो जीवनीमा आधारित फिल्म ‘सचिन अ बिलियन ड्रीम्स’ को एउटा गीत सार्वजनिक समारोहमा पुगेका सचिनले यो पुरै कथाको पटाक्षेप गरे।
उनले मैदानभन्दा अगाडि आफ्नी आमाले यसको सुरुवात गरेको बताए। ‘जब म खेलेर घर फर्किन्थेँ आमाले मलाई यही लयमा बोलाउनु हुन्थ्यो,’ सचिनले भने। उनले आमाको त्यही लय पछि मैदानमा गुञ्जिन थालेको बताए।
‘सचिन अ बिलियन ड्रीम्स’ को गीत पनि ‘सचिन..सचिन’ को लयमै छ। यो गीतलाई सुखविन्दर सिंहले आवाज दिएका छन्। कम्पोज भने एआर रहमानको छ।
सचिनले यही अवसरमा आफूले बच्चामा ब्याट समातेर खिचेको चर्चित फोटोको कथा पनि बताए। उनले त्यो फोटो भाइसँग घरमा खेलिरहेको अवस्थामा लिएको बताए। ‘फोटो बालकनीमा लिएको हो। त्यतिबेला मेरो उमेर ४–५ वर्षको हुनुपर्छ। त्यतिबेला मेरो पोजिसन राम्रो थिएन। बललाई हिर्काउन खुब मजा लाग्थ्यो। कहिलेकाँही म बललाई ब्याटले हिट गर्थें, कहिले टेनिस र्याकेटले,’ उनले भने।
पूरै सेवाको भावना राखेर राजनीतिमा लाग्नुस्, झन्झट लाग्छ भने छोड्दिनुहोस्ः कांग्रेस नेता सिंह
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले नेता कार्यकर्ताहरुलाई निराश नहुन र पार्टीको सुधारमा लाग्न निर्देशन दिएका ...
राष्ट्रिय तेक्वान्दो सङ्घ–नेपालले काठमाडौं जिल्ला तेक्वान्दो सङ्घको पुनर्गठन गरेको छ । सङ्घका अध्यक्ष श्रीकृष्ण श्रेष् ...
काठमाडौँ । पिस प्वाइन्ट बोर्डिङ्ग स्कुलको आयोजनामा म्युचअल एकेडेमीक एक्टिभिटिज फोरम (माफ) अन्तर विद्यालय वादविवाद प्रतियोगित ...
ज्ञानेन्द्र किन जाँदैछन् सिमरा ?
काठमाडौं - पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह यही वैशाख ३० गते बारा जिल्लाको सिमरा जाने भएका छन् । आजको नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ...